Asa 17 - Ny Baiboly
Asa toko 17
Paoly sy Silasy tany Tesalonika sy tany Berea - Paoly tany Atena.
1Dia namaky an'i Anfipolisy sy Apolonia izy ireo, ka tonga tany Tesalonika, izay nisy sinagogan'ny Jody. 2Niditra tao araka ny fanaon'i Paoly, ary sabata telo no niadiany hevitra tamin'ny olona tao, momba ny Soratra Masina. 3Nasehony sy noporofoiny mazava fa tsy maintsy ho nijaly sy nitangana tamin'ny maty ny Kristy, ary izany Kristy izany dia Jesoa izay toriko aminareo, hoy izy. 4Nino ny sasany tamin'izy ireo, ka nikambana tamin'i Paoly sy Silasy, toraka izany koa jentily maro be tia vavaka, sy vehivavy ambony toetra betsaka. 5Fa velom-pialonana kosa ny Jody, ka namory olona ratsy fanahy tamin'ny faikan'olona, ary nony tafavory betsaka izy ireo, dia nampitabataba ny tanàna. Nanodidina ny tranon'i Jasòna izy ireo nitady hamoaka azy roa lahy ho eo anatrehan'ny vahoaka. 6Nony tsy nahita azy roa lahy izy ireo, dia i Jasòna sy ny rahalahy sasany no notarihiny ho any amin'ny lehiben'ny tanàna, nampangainy hoe: Tonga atý koa irony olona mpanakotontam-bahoaka irony, 7ka noraisin'i Jasòna; nefa manohitra ny tenin'i Sezara izy ireo, satria milaza fa misy mpanjaka hafa koa, dia Jesoa. 8Taitra ny vahoaka sy ny lehiben'ny tanàna raha nandre izany, 9ka tsy navelany handeha Jasòna sy ny namany raha tsy efa nametraka antoka.
10Nony alina, dia nampandehanin'ny rahalahy niaraka tamin'izay Paoly sy Silasy hankany Berea. Ary nony tonga tany izy roa lahy, dia niditra tao amin'ny sinagogan'ny Jody. 11Tsara toe-panahy kokoa ry zareo tao noho ny tany Tesalonika, satria sady nandray ny teny tamin-jotom-po lehibe izy ireo no nandinika ny Soratra Masina isan'andro, mba hahitany raha mifanaraka amin'izay ampianarina azy na tsia. 12Koa betsaka tamin'izy ireo no nino, ary maro koa ny vehivavy jentily ambony toetra sy ny lehilahy no nandray ny finoana. 13Nony ren'ny Jody tany Tesalonika anefa fa nitory ny tenin'Andriamanitra tany Berea Paoly, dia nankany indray izy ireo, nampitaitra sy nampitabataba ny vahoaka. 14Niaraka tamin'izay, dia nampandehanin'ny rahalahy Paoly hankany amoron-dranomasina, fa Silasy sy Timote no nijanona tao Berea.
15Niaraka tamin'i Paoly hatrany Atena ry zareo nanatitra azy; rahefa izany dia nohafaran'i Paoly handefa an'i Silasy sy Timote hanatona azy faingana izy ireo, dia lasa. 16Raha mbola niandry azy ireo tany Atena i Paoly, dia nangorakoraka ny fanahiny, nahita ity tanàna feno sampy. 17Koa dia niady hevitra tamin'ny Jody sy ny proselita tao amin'ny sinagoga izy, ary tamin'izay tafavory tao an-kianja isan'andro. 18Nisy filozofy sasany tamin'ny Epikoriana sy ny Stoisina niady hevitra taminy koa. Hoy ny sasany: Inona re no tadiavin'io mpibedibedy io e? Ary hoy kosa ny sasany nandre azy nitory an'i Jesoa sy ny fitsanganana amin'ny maty: Toa mitory andriamani-baovao izy izany. 19Dia nalain'izy ireo i Paoly, ka nentiny tany amin'ny Areopaza, nilazany hoe: Mba azonay fantarina va re izao fampianarana vaovao lazainao izao e? 20Fa zavatra tsy fandren'ny sofinay no lazainao; koa mba ta-hahalala izay hevitr'izany izahay. 21Fa ny Ateniana rehetra sy ny vahiny nitoetra tao, dia tsy nandany ny andro afa-tsy tamin'ny filazana na fihainoana zava-baovao.
22Dia nitsangana teo afovoan'i Areopaza Paoly ka nanao hoe: Ry lehilahy Ateniana, hitako amin'ny zavatra rehetra etoana fa olona fatra-pivavaka loatra hianareo. 23Satria raha nandalo aho ka nijery ny zavatra ivavahanareo, dia nahita otely anankiray misy izao soratra izao: Ho an'ny Andriamanitra tsy fantatra. Koa izay ivavahanareo izay, nefa tsy fantatrareo no toriko aminareo: 24Ny Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra ao aminy no tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mba ny tempoly nataon'ny tànan'ny olona fotsiny no itoerany. 25Tsy mba tompoin'ny tanan'olombelona izy, fa tsy misy toy ny hoe zavatra ilainy, fa izy aza no manome an'izao rehetra izao ny aina sy ny fofon'aina, ary ny zavatra rehetra. 26Avy tamin'ny olona iray no nampihaviany ny firenena rehetra, mba hamenoany mponina ny vohon'ny tany rehetra, ary izy ihany no nametra ny taona hisiany sy ny faritany honenany avy, 27mba hitady an'Andriamanitra izy, raha tàhiny hahatsapa ka hahita azy, na dia tsy lavitra antsika rehetra aza izy; 28fa ao anatiny no ivelomantsika, sy ihetsiketsehantsika, ary iainantsika, araka ny voalazan'ny mpanao tonon-kira sasany taminareo hoe: Taranany koa isika. 29Koa raha taranak'Andriamanitra àry isika, dia tsy tokony hino fa ny fomban'Andriamanitra dia mitovy amin'ny volamena, na ny volafotsy, na ny vato izay nataon'ny tànana amam-pahaizan'ny olombelona. 30Tsy nahoan'Andriamanitra ny andron'ny tsy fahalalana fahizany; fa asainy hibebaka daholo kosa ankehitriny ny olona rehetra amin'izao tontolo izao. 31Satria izy efa nanendry andro anankiray hitsarany an'izao tontolo izao araka ny rariny, amin'ny alalan'ny Lehilahy anankiray izay efa voatendriny sy nohamarininy mba hinoan'ny olona rehetra, tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty.
32Nony nandre izany hoe fitsanganan'ny maty izy ireo, dia nihomehy ny sasany, fa ny sasany kosa nanao hoe: Mbola hihaino anao indray izahay ny amin'izany. 33Toy izany no nialan'i Paoly teo amin'izy ireo. 34Nisy olona vitsivitsy nino sy nikambana taminy ihany anefa; anisan'ireo Denis isan'ny Areopaza, sy vehivavy anankiray atao hoe Damarisy, ary ny sasany hafa koa. >